अनुसन्धान भन्छ: अब भ्रूणमै शिशुलाई रोगबाट मुक्ति !
विश्‍वमा धेरै शिशुहरु भ्रूण अवस्थामै रोग लागेर मृत्‍युको मुखमा पुगिरहेको बेला वैज्ञानिकहरुले पहिलो पटक यसको समाधान निकालेका छन्।उनीहरुले हृदय रोगका कारण बन्‍ने खराब डिएनएको एउटा हिस्सालाई अलग गर्न सफल भएपछि शिशु बिरामी हुने खतराबाट मुक्त हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकारको ओर्गन हेल्‍थ एण्ड साइन्स युनिभर्सिटी तथा साल्‍क इन्स्टिच्‍युटसँग दक्षिण कोरियाको इन्स्टिच्‍युट फर बेसिक साइन्सको […]
यस्ता छन् निद्रा बिगार्ने तत्वहरु, अनिद्राले ठरलाग्दा समस्याहरु सिर्जना
तपाईलाई थाहा छ, अहिले संसारभरको पहिलाको तुलनामा मानिसहरु कम सुतिरहेका छन् ? पछिल्लो ७० वर्षमा मानिसको निद्रा २० प्रतिशत घटेको छ। एक अध्ययनका अनुसार सन् १९४० को दशकसम्म संसारमा अधिकांश मानिस राति करिब ८ घण्टा निदाउँने गर्दथे । तर, अहिले मानिसहरुको सुत्ने समय घट्दो क्रममा छ। अमेरिकाको बर्कलेस्थित क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीका प्रोफेसर मैट वाकरकाअनुसार अहिले हामी […]
बढी तनावले बढाउन सक्छ पागलपनको खतरा, यस्ता छन् बच्ने उपाय
तनावपूर्ण घटनाहरुले पागलपनको खतरा बढाउने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जीवनका तनावपूर्ण घटना, जस्तो कि बच्चाको मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद वा रोजगारीबाट निकालिनुजस्ता घटनाको असर सोझै दिमागमा पर्ने गर्दछ, जसले व्यक्तिलाई बुढो बनाउन सक्दछ । अमेरिकाको एउटा अध्ययन टिमले यो दावी गरेको हो । ५० वर्ष उमेर समूहका १३०० जनामा उनीहरुले स्मरणशक्ति र सोच्ने क्षमता अध्ययन गरेका […]
वैज्ञानिकहरुले कुन व्यक्तिलाई हृदयघात हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने तरिका पत्ता लगाएको बताएका छन् । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले यो अध्ययनबाट मृत्युको सबैभन्दा ठुलो कारणमध्ये एक हृदयघातको उपचारमा निकै सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् । यो नयाँ तरिकाबाट धमनीहरुको चारैतिर मोटोपन र सुजन पत्ता लगाउन सहज हुनेछ । समयमै यो थाहा पाउनु जरुरी छ। यसको […]
सबै स्वास्थ्य रिपोर्टहरु यो निष्कर्षमा टुंगिएको छ कि मोटोपन विश्वव्यापी समस्या हो । मोटोपनका विषयमा संसारभर यो ठुलो चिन्ताको विषय हो भन्ने चर्चा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१४ को रिपोर्टअनुसार संसारमा ६०० मिलियन अर्थात ६० करोड बढी मानिस मोटोपनको शिकार बनेका छन् । यस आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्ने गरेको छ कि यो कुनै […]
बालबालिकालाई इन्टरनेट प्रयोग सीमित गरेर मात्रै उनीहरुलाई सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रभावबाट बचाउन नसकिने एउटा अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। बेलायतको एजुकेशन पोलिसी इष्न्टिच्युटले गरेको एउटा नयाँ अध्ययनमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । विकसित देशहरुमा इन्टरनेटको प्रयोगको दरको मामिलामा बेलायती किशोर निकै अगाडि छन् । यसको सिधा असर उनीहरुको स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। यो नयाँ […]